သောသီခို: KNU delegates vote-in five new leaders
The Karen National Union’s top five positions were elected inasecret ballot at the organisation’s 15th Congress held at Lay Wah, Pa-an District, Karen State, today, 21 December.
The five new leaders are – General Mutu Say Poe, chairperson, Naw Zipporah Sein as vice-chairperson, Padoh Saw Kwe Htoo Win is the new general secretary, Padoh Saw Thaw Thi Bwe is joint secretary 1 and Mahn Mahn Mahn is the joint secretary 2.
The KNU delegates also voted for Padoh Saw Ah Toe as its Cheif Judge, although other executive committee members such as the department heads have yet to be elected. KNU sources expect the appointment and approval of remaining executive committee members to be completed on Monday, December 24.
The Karen National Union’s 15th Congress began on November 26 and was attended by representatives from seven KNU Districts and Brigades, members of overseas based Karen groups and local community organizations, observers and other individuals –atotal of 200 people.
Posted by PKD at 7:05 AM
မင်းမခ သကြားမင်း said...
အရှက်မရှိတဲ့မျက်နှာ... ကြောင်မျက်လုံး... ဆီရွမ်းနေတဲ့ဒယ်အိုးမျက်နှာ. ဥက္ကဋ္ဌ မူတူးစေးဖိုး...အလိုမရှိ...အလိုမရှိ...အလိုမရှိ....
Min Pa Pa said...
စကားမပြော အီးမပေါက်ပုံစံနဲ့မူတူးက သူကို ထောက်ပြပြောဆိုသူတွေကို လှလှကြီး မြောင်းထည့်ပို့ လိုက်ပါတယ်။ ဒေးဗစ်တာကပေါ်နဲ့ လှငွေကို မူတူးက ကလက်စားခြေလိုက်ဒါပဲ။
ဦးအောင်မင်းနဲ့ သိန်းစိန်တို့ အနိုင်ရတဲ့ပွဲပါ ခင်ဗျား
ကရင်လူမျိုးအပေါင်းတို့ မူတူးဆေးဖိုးလိုခေါင်းမာပြီးဆင်ရိုင်းတောတိုးလုပ်တတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုး လက်ထဲကျမှ မကျဆုံးယင်တော့ ကရင်တွေဘယ်တော့မှကျဆုံးစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဖူး။ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ပြီး ပညာရှိ ကရင်လူမျိုးတွေပေါ် အနစ်နာခံမဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနေရာမရတာ အတော်ခံပြင်းစရာကောင်းပါတယ် ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ပွဲရဲ့ ပိတ်ကားနောက်မှာလဲ သိန်းစိန်အစိုးရလို လျှို့ဝှက်တဲ့အကြောင်းအရင်းတွေရှိနေမှာအမှန်အပါပဲ။ဒီခေါင်းဆောင် တင်မြှောက်ပွဲက KNU အဖွဲ့အစည်းကြီးဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကိုနားမထောင်လက်မခံတာကို သက်သေပြလိုက်တာပဲ (သိန်းစိန်၊အောင်မင်း) လက်ခမောင်းသာခတ်ကြပေတော့
Hay; Be quiet! Enough is Enough.
Near future they will get poison food or water from Aung Min like David Taw. Be ready to dig some hole 4' 5' for Mutu one, and Kweh Htoo win one and Thaw Thi Bweh one as well. Buried them close to David Taw. After those three prepare one for Johny so it will be five tomb.
Chee Ngah Chee ( Shit five Shit).
Mu Tu- David Taw- Kweh Htoo Win- Thaw Thi Bweh and Johny.
Mu Tu Say PO sould not be KNU chair man, he is fucking brain ,facking face and sucking OO Aung Min dick.fucking fucking...............fucking
မောင် ရိုး said...
အင်တာနက်ပေါ်ကနေ ဝါဒဖြန့် နေတဲ့ လူလေးငါးယောက် ကို ကရင်ပြည်သူလို့အများကိုယ်စားမသုံးသင့်ပါဘူး တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူကသာလျင် တကယ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းခံရတာပါ ဖျင်းတဲ့ စပါးတွေကတော့တလင်းအပြင်ဖက်ရောက်သွားတာ ထုံးစံပါဘဲ မင်းတို့ ကမှ အောင်မင်း သိန်းစိန်တို့ ထက်ပိုပြီးကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်
KU HSER said...
Maung Yoe stupid person.
မောင်ရိုး........is fucking brain ,facking face and sucking OO Aung Min dick.fucking fucking...............fucking